अब भक्तपुरको जगातीबाट पनि लाईसेन्स ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > अब भक्तपुरको जगातीबाट पनि लाईसेन्स !
भक्तपुर । अब भक्तपुरको जगातीबाट पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन सकिने भएको छ । सरकारको निर्णयाअनुसार भक्तपुरको जगातीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
भक्तपुरमा उक्त कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौं उपत्यकाको मध्य पूर्वका जिल्लाहरुका सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स लिन अब राजधानी धाउनु नपर्ने भएको छ । सर्वसाधारणले उक्त कार्यालयबाट लाइसेन्स नवीकरण र विदेशमा लिएको लाइसेन्सको नेपालीकरणसमेत गर्न सक्नेछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार एक कार्यक्रमबीच उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् ।
मन्त्री लेखकले भक्तपुर जगातीमा पनि नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि लाइसेन्स फारम भर्ने तथा लिने कार्य थप सजिलो र चाँडो हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले काठमाडौंको चाबहिलमा पनि एकसाताभित्र नयाँ कार्यालयमा सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।
ललितपुरको एकान्तकुनाबाट मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुँदा सर्वसाधारणले धेरै नै सास्ती झेल्दै आएका थिए । लाइसेन्सको फारम बुझाउनसमेत २४ घन्टाभन्दा बढी लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सरकारले गत असोज ६ गते काठमाडौं उपत्यकामा थप तीनवटा ठाउँबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयानुसार पुस १७ गतेबाट स्वयम्भूस्थित सानो भ¥याङमा नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै आइतबारबाट भक्तपुरको जगातीमा नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो ।
मन्त्री लेखकले कार्यालय थप भएपछि ट्रायल सेन्टरमा चाप बढ्ने भएकाले सबै कार्यालयलाई आआफ्नो छुट्टै ट्रायल सेन्टर व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
‘यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकासँगै तत्काललाई पोखरा र इटहरीमा अनलाइनबाट लाइसेन्सको फारम भर्ने र स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने जानकारी दिए ।
त्यसलगत्तै अञ्चलस्तरमा अनलाइनबाट लाइसेन्सको फारम भर्ने र स्मार्ट कार्ड वितरण हुने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार सरकारी प्रक्रियाअनुसार कम्तीमा २० दिनपछि जगातीबाट पनि लाइसेन्स वितरण कार्य हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ २
२०७३ माघ २ गते १६:०२ मा प्रकाशित
भविष्य ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री युएईमा
सेयर बजार आज : स्ट्याण्डर्ड चार्टडमा झुम्मिए लगानीकर्ता !
५५ घरलाई एउटै शौचालय
एप्पलमा वारेन बफेटको १ अर्ब लगानी
समता लघुवित्तको १ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर लिलामी खुल्ने